कसरी Waze वा Google नक्सा CarPlay मा थप्न म म्याकबाट हुँ
Waze वा Google नक्सा CarPlay मा कसरी जोड्ने
यदि तपाईंले अन्तिम दिनहरूका समाचारहरू अनुसरण गर्नुभयो भने, तपाईंलाई थाहा हुनेछ कि एप्पल कारप्ले अन्य नक्शामा खुल्छ। हाल, र आईओएस ११ संस्करण अन्तर्गत यो सम्भव छैन। यदि तपाईं नक्शा चाहनुहुन्छ भने, यो एप्पल नक्शाको हुनुपर्दछ। यद्यपि आईओएसको आगमन संग 11 चीजहरू परिवर्तन हुनेछ र अन्य अनुप्रयोगहरू जस्तै गुगल नक्सा वा लोकप्रिय वेज ब्राउजर थप्न सकिन्छ.
यो सत्य हो कि प्लेटफर्मको अन्तिम संस्करण प्रयोगकर्ताहरूमा अर्को सेप्टेम्बर सम्म पुग्न सक्दैन। यद्यपि विकासकर्ताहरूको लागि पहिलो बेटा हो जुन4बाट उपलब्ध छ y पहिलो सार्वजनिक बीटा जून को यस महिनाको अन्त्यमा त्यसो गर्नेछ। त्यसकारण, त्यहाँ कार्यहरू छन् जुन तपाईं पहिले नै प्रयास गर्न सक्नुहुनेछ - यदि तपाईं हिम्मत गर्नुहुन्छ भने - तपाईंको उपकरणमा।
तसर्थ, तपाईंले गर्नु पर्ने पहिलो कुरा हो तपाईंको आईफोनमा आईओएस १२ को पहिलो बेटा स्थापना गर्नुहोस्; यदि तपाइँ आईओएस ११..11.4 को साथ यि चरणहरू गर्नुहुन्छ भने यो सम्भव छैन, यद्यपि यसले तपाइँलाई केहि थप्न वा मेटाउन मद्दत गर्दछ अनुप्रयोग तपाईंको गाडी स्क्रिनबाट। त्यस्तै, सबै अनुप्रयोगहरू CarPlay सँग उपयुक्त छैन; यदि ती छन् भने, तिनीहरू पर्दामा सीधा देखा पर्दछ। अब यी दुई जीपीएस नेभिगेसन विकल्पहरू मध्ये कुनै पनि थप्न यो सम्भव छैन, कि न त Waze न Google नक्सा।
सबै भन्दा पहिले, को लागी «सेटिंग्स» आईफोनको र विकल्प खोज्नुहोस् "सामान्य"। भित्र पुग्दा सम्म तपाईं पुग्नै पर्छ "CarPlay" र फेरि थिच्नुहोस्। तपाईं देख्नुहुनेछ कि यसले तपाईंलाई यी दुई अनुप्रयोगहरू थप्न चाहेको सवारीको चयन गर्न दिनेछ - सवारी साधनहरूको पूर्ण सूची जुन तपाईंको आईफोनसँग दर्ता गरिएको वा लिंक गरिएको छ देखा पर्नेछ।
यो क्षण हो जसमा तपाइँ पर्दामा प्रतिनिधित्व गर्दछ कसरी CarPlay तपाइँको सवारी मा देख्नुहुनेछ र जोडिएका अनुप्रयोगहरू। तल तपाईं उपयुक्त अनुप्रयोगहरू देख्नुहुनेछ जुन थपिएको छैन र त्यो सानो आइकन (+) सँगै हुन्छ जुन तिनीहरूलाई सूचीमा थप गर्दछ। यो तपाईको Waze वा Google नक्साको साथ के गर्नुपर्नेछ CarPlay मा मजा लिन.
लेखको पूर्ण मार्ग: म म्याकबाट हुँ » एप्पल » ट्यूटोरियलहरू » Waze वा Google नक्सा CarPlay मा कसरी जोड्ने
साथीहरु, यो अहिलेसम्म सम्भव छैन, तपाईले बीटामा स्पष्ट गर्नु पर्छ - यो उपलब्ध छैन कि ...
यो पनि मेरो लागि काम गर्दैन। न त आईफोन एक्स मा र न 6. मा दुबै iOS १२ बिटा १ र Waze र Google नक्साको साथ स्थापना गरिएको छ।
आइओएस १२ बीटा २ मा काम गरिरहेको छैन
Josiamon लाई जवाफ दिनुहोस्
जुलाई सी भन्यो
बीटा in मा काम गरिरहेको छैन
Julio.C लाई जवाफ दिनुहोस्
बीटा working काम गरिरहेको छैन
ट्रेभरलाई जवाफ दिनुहोस्
नमस्ते। मैले भर्खर iO12 स्थापना गरेको छु, Waze वा Google नक्सा + मेरो प्रतीकमा मेरो कार प्लेमा तिनीहरूलाई थप्नको लागि देखा पर्दैन। कुनै सुझाव? धन्यवाद!
मेरो म्याक फिर्ता फिर्ता macOS Mojave बाट गायब हुन्छ
सिमसिटी Del डिलक्स संस्करण खेल खरीद गर्न राम्रो समय